Boqortooyada Midowday oo bareegyada saaraysa sanaadiiqda bililiqada | Androidsis
Boqortooyada Midowday ayaa kula biiri doonta Belgium iyo Spain kala soocida sanduuqyada bililiqada sida 'ciyaar'
In kasta oo ay goor dambe tahay, ayaa Boqortooyada Midowday (UK) ayaa kala saari karta sanduuqyada bililiqada ama sanduuqyada bililiqada iyada oo qayb ka ah warshadaha ciyaaraha ee la xidhiidha casinos, buugaagta sameeya iyo waxyaabo kaloo badan.
Nidaam qalloocan oo gacan ka geysta qabatinka ciyaartooyda da 'yarta ah ee u noqonaya fayras warshadaha ciyaarta fiidiyowga; kaliya ma ahan midka mobilada, tan iyo istiraatiijiyaddan "freemium" xitaa waa duulaan Ciyaaraha kombiyuutarka iyo kombuyuutarrada.
Waaxda UK ee Dijital, Dhaqanka, Warbaahinta iyo Cayaaraha toddobaadkan waxay soo bandhigi doontaa waxa ugu muuqda Kordhinta sanduuqyada bililiqada dhammaan noocyada ciyaaraha sida FIFA lafteeda.
Dhaqdhaqaaqani waxaa sabab u ah aasaaska kuwa sanduuqyada bililiqeysta ee nidaam xun taas oo kicinaysa dhaqanka qabatinka khamaarka taasina waxay sababi kartaa isla qabatinka noocyada kale ee khamaarka ee laxiriira buugaagta iyo khamaarka guud ahaan.
Sanduuqyadan bililiqada ah ama sanduuqyada bililiqada waxaan horey u ogaanay iyaga si fiican iyo siiyaan abaalmarinno sida jilayaal ama qalab iyaga oo aan ogeyn waxa ay bixin doonaan. Taasi waa, istiraatiijiyad la mid ah sida marka aan u isticmaalno qadaadiic 50 senti ah mishiinka wax lagu kala iibsado.
Haddii ugu dambayntii wasiirradu dib u kala-saaraan sanduuqyadan boobka, ee Boqortooyada Ingiriiska, iyo sidii ka dhacday Belgium, ama uu ku dhawaaqay Wasiirka Isticmaalka halkan Isbaanishka, waxay u horseedi doontaa horumariyayaashu inay ka baxaan ciyaaraha qaarkood suuqa ama dib loo naqshadeeyay si looga iibiyo kuwa kayar 18 sano.
Noocan ah sanduuqyada bililiqada ayaa sii waday inay sii kordhaan tiro badan oo ciyaaro ah, oo waxay ku jirtaa taleefannada gacanta halkaas oo ay ka heleen meel wanaagsan oo lagu noolaan karo. Xaqiiqdii, Steam loogu talagalay PC-ga maanta waxaa laga helaa 71% cinwaannada, halka toban sano ka hor kaliya loo isticmaalay 4%.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Boqortooyada Midowday ayaa kula biiri doonta Belgium iyo Spain kala soocida sanduuqyada bililiqada sida 'ciyaar'
Moto E LE ayaa ka muuqda muuqaal cusub oo qeexitaankiisa ayaa la sifeeyey
Habka Mugdiga ee Facebook ee loogu talagalay Android ayaa soo socda goor dhow